Ny karazana sary SEO - Torohevitra tsotra avy amin'ny Semalt Expert
Ny sary sy ny horonan-tsary dia tombony ho an'ny fifamoivoizana organika sy ny fikarohana , fa indrisy fa matetika izy ireo no tsy mahita izany. Azo antoka ny filazana fa ny sary dia mitondra fifamoivoizana bebe kokoa ary manatsara ny tranokalan'ny tenanao fikarohana . Misy ny sasantsasany amin'ny sary fanatsarana izay ahitana toerana tsara kokoa amin'ny valin'ny Google, fanatsaràna ny fanandramana kokoa amin'ny mpampiasa, ary ny fanamafisana ny famoahana ireo haino aman-jery sosialy. Ho an'ny fanatsarana ny sary, tokony hieritreritra momba ny rafitra URL, ny famaritana ny soratra, ary ny lahatsoratra fanoratana - us e cig supplier. Ireto ny toro-hevitra enina ao amin'ny sary SEO natolotr'i Lisa Mitchell, Semalt Customer Success Manager.
1. Hitady sary tsara:
Zava-dehibe ny mahita ny karazana sary tsara. Ny sary avo lenta dia manampy ny lanjany sy ny endriny amin'ny lahatsoratra na tranonkala misy anao. Ankoatra izany, mamporisika ny olona izy ireo hizara ny votoatiny ary manome anao ny lamandy azo antoka. Azonao atao ny mahita ny sary mifanaraka amin'ny Flickr, iStockPhoto, Shutterstock ary Getty Images. Ny Flickr dia angamba ny tolotra tsara sy ampiasaina betsaka indrindra amin'ny fitadiavana sary maimaim-poana. Eto ianao dia afaka miditra sary maromaro ary maka sary betsaka araka izay tianao. iStockPhoto sy Shutterstock dia manana tahiry be dia be. Azonao atao ny manoratra momba ireo tolotra ireo mba hahazoana ireo saripika ireo.
2. Ampiasao ny teny fototra ao amin'ny filahanao:
Tahaka ny fampiasanao ny URL hanoritsiana lahatsoratra na pejy manokana dia tokony hampiasa ny teny fototra ao amin'ny filahanao ianao. Ataovy azo antoka fa ny teny fanalahidy fototra dia ampiasaina amin'ny anaran'ny rakitrao ny sary. Tsy tokony ho toy ny iStock_0004221245XSmall..jpg satria ireo filaharana ireo dia tsy mampiditra vaovao momba ny votoatiny. Raha tokony izany, tokony averinao amboarina amin'ny sary-optimization.jpg.
3. Mamoròna andinin-tsoratra masina:
Zava-dehibe ny mamorona antonta alt-albatra na alikaola. Ireo fanampiana ireo Google, Bing, ary Yahoo dia mamaritra ny zavatra manodidina anao. Tsy toy ny votoatim-poko nentim-paharazana, ny motera fikarohana dia tsy afaka manombana ny lahatsoratry ny sary raha tsy efa nampiditra lahatsoratra ara-dalàna.
4. Ny lahatsoratra fanoratana:
Ny lahatsoratra an-tariby dia iray amin'ireo antony lehibe amin'ny sary SEO. Raha te hampiasa sary maromaro ao anaty lahatsoratra iray ianao, dia tadidio fa ampidirina am-bava tsara ireo lahatsoratra an-jorony. Ampiasao ireo andinin-tsoratra momba ny endri-tsoratra hanoritsoritra ny sarinao. Zavatra iray tena manan-danja tokony hodinihina dia ny tokony hampiasanao ny teny fototra fototra amin'ny famaritana ny sarinao. Tsy ilaina ny mampiasa teny manerantany tsy mifanaraka amin'ny dikan'ny votoatinao. Ny fikarohana dia manampy amin'ny fitaovana fitadiavana ny karazan-javamaniry sy ny karazana sary ampiasainao.
5. Ny sary dia tokony hifanaraka amin'ny votoatinao:
Ny votoatiny manodidina ny sary anao dia tokony hifanaraka amin'ny URL, sary etsy ambony, ary lahatsoratra. Ankoatr'izay, tokony hampifanaraka ny votoatinao sy ny sary ianao mba hikolokolo olona bebe kokoa. Hanampy ireo fitaovam-pitadiavana hanamafy fa tsy manandrana mikaroka ianao ary ny sary dia manan-danja ary manana kalitao avo.
6. Aza manangona:
Handeha ho an'ny karazana fanodinana karazam-pikarohana rehetra izany, fa hiteny mazava isika hoe: Tsy tokony hameno ny teny fanalahidy hameno ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny sary ianao. Ny andinin-teny, ny soratra, ary ny anaran-drakitrao dia tokony hoso-doko, feno sy fohy. Tokony hanatsara ny sary amin'ny fomba izay ahafahan'ny mpampiasa misimisy kokoa, mandray anao fikarohana lalao fikarohana tsara kokoa .